Labo xiddig muhiim ah oo seegay tababarkii ugu dambeeyey ee kooxda Man United isugu diyaarinayso kulanka Europa League – Gool FM
(Yurub) 23 Okt 2019. Sida wararku ay sheegayaan labo ciyaaryahan oo muhiim ah ayaa seegay tababarkii ugu dambeeyey ee kooxda Manchester United ay maanta isugu diyaarinaysay kulanka habeen dambe ee Europa League.
Goolhaye David de Gea iyo Paul Pogba ayaa seegay tababarkii saakay oo Arbaco ahayd ay Manchester United isugu diyaarinaysay kulanka Europa League oo ay wajihi doonaan naadiga Partizan Belgrade.
Jesse Lingard ayaa ka qeyb qaatay tababarkii ay xiddigaha Man United ku qaateen Carrington ka hor inta aysan shaxda kooxda u raacin Serbia, laakiin Pogba iyo De Gea ayaa seegay si la mid ah Diogo Dalot, Luke Shaw, Nemanja Matic, Timothy Fosu-Mensah, Axel Tuanzebe iyo xiddiga mudada dheer iska maqan ee Eric Bailly.
De Gea ayaa dhaawac uu ka soo gaaray waajibaadka xulkiisa qaranka Spain horraantii bishaan, waxa uu dhaawac muruqa ah ku seegay kulankii isreeb-reebka Euro 2020 ee Sweden, laakiin waxa uu awooday inuu ciyaaro kulankii Axaddii ee Premier League oo ay barbaro 1-1 la galeen Liverpool.
Yeelkeede, hadda waxa ay u muuqataa inuu booskiisa buuxin doono oo uu bedeli doono goolhaye Sergio Romero kulanka habeen dambe ee Belgrade.
Dhinaca kale Pogba ayaa sii joogteeyey maqnaanshiisa dhaawaca cagta ah, waxaana uu fasaxiisa ku qaatay Dubai intii lagu guda jiray ciyaaraha caalamiga ah, si uu isugu dayo inuu ka soo kabto dhaawacaas.
Shaw iyo Matic ayaa qudhoodu maqnaa waxaana ay u safreen Dubai si ay ugu soo qaataan tababar adag cimillada diirran ee magaaladaasi.
Tuanzebe ayaa lagu daray dhaawacyada kooxda macallin Ole Gunnar Solskjaer, kaddib markii dhaawac misigta ah looga saaray kulankii ka dhacay Old Trafford kaddib markii lagu bilaabay safka hore ee ciyaartii ay ka horjeedeen Liverpool.
Laakiin warka u wanaagsan Jamaahiirta Man United ayaa waxa uu yahay in Lingard uu ka soo laabtay dhaawac muruqa ah, halka Anthony Martial iyo Aaron Wan-Bissaka ay horumar sameeyeen kaddib markii ay ka soo muuqdeen kulankii Reds, Phil Jones ayaa isaguna soo laabtay laakiin waxa uu fadhiyey kursiga keydka.